Imikhiqizo & Izithombe
Amathrekhi wokulayisha we-Skid steer
Amapayipi wenjoloba akhethekile
Izinzuzo zokumba okukhasayo
Umsebenzi oyinhloko we "track" ukukhulisa indawo yokuxhumana nokunciphisa ingcindezi phansi, ukuze ikwazi ukusebenza kahle emhlabathini othambile; umsebenzi we "grouser" ikakhulukazi ukwandisa ukungqubuzana nendawo yokuxhumana nokwenza lula imisebenzi yokuqwala. Cr yethu ...
Isimo samanje semishini yokwakha ehlangene yokukhiqiza abakhasi
Izimo zokusebenza kwabembayo, o-bulldozer, o-cranes abakhasayo neminye imishini emishinini yokwakha inzima, ikakhulukazi abakhasi ohlelweni lokuhamba emsebenzini badinga ukumelana nokungezwani okukhulu nomthelela. Ukuze kuhlangatshezwane nezinsimbi zomkhambi, kuyadingeka ...
Izindinganiso zokuhlolwa kwamamaski wezokwelapha
1. Isifihla-buso sokuvikela ngokwezokwelapha Sihambisana ne-GB19083-2003 "Izidingo Zobuchwepheshe Zamamaski Wokuvikela Kwezokwelapha". Izinkomba ezibalulekile zobuchwepheshe zifaka ukusebenza ngokuhlunga kwezinhlayiyana okungekho oily nokumelana nomoya: (1) ukusebenza kahle kokuhlunga: Ngaphansi kwesimo somoya ...
Sasise BAUMA Shanghai 2018
Sizoya kwi-intermat 2018 ngo-04/2018
Sizohambela i-Intermat 2018 （International Exhibition For Construction And Infrastructure） ngo-04/2018, samukelekile ukusivakashela！ Idokodo No. NumHall a D 071 Usuku: 2018.04.23-04.28
Izinsiza Zemvelo ZaseGator Track